I-Linux Semplice: Ukushintshwa kweCrunchbang? | Kusuka kuLinux
Angijwayele ukuba nentshisekelo ekusatshalalisweni okuncane, noma kunalokho, okuza ngokuzenzakalela nge Abaphathi bamawindi ukuphatha ideskithophu.
Ngaleso sikhathi lapho ngangisebenzisa I-OpenBox + Tint kudluliselwe kokukhohlwayo. Kodwa-ke, angiyeki ukubona ukuthi abasebenzisi abaningi bahlala njalo ngalolu hlobo lokucushwa kanye nesibonelo esihle kakhulu esinaso noMphakathi I-Crunchbang (okuthi ekugcineni angikaze ngithole ukuthi ngabe iphrojekthi likhanseliwe noma liyaqhubeka).
Iqiniso ukuthi ngenkathi ngiphequlula amanethiwekhi wokuxhumana nabantu engihlala ngiwajwayele, ngibone okuthathiwe kokusabalalisa okusha okunemvelaphi yase-Italiya ebizwa I-Semplice LinuxYebo, bathi ilukuluku labulala ikati. Ukubona nje ukuthi "isinikeze" okunye ukusatshalaliswa, ngakulanda, ngakufaka, ngakuhlola futhi manje ngikulethela isibuyekezo esincane 😀
1 Ukufaka i-Semplice Linux
2 Ukungena ku-Semplice
3 Yini esiyithola kuSemplice?
Ukufaka i-Semplice Linux
I-Semplice Linux sebenzisa njengesisekelo I-Debian ayizinzile (Ayaxwayiswa), futhi inezinguqulo zazo zombili izingcezu ezingama-32 nezingama-64. Ingafakwa ku-USB stick usebenzisa umyalo dd
Vele, kufanele bashintshe indlela lapho i-ISO itholakala khona negama ledivayisi lapho ithi sdX
Nini sabhoboza amabhuzu ngememori sinethuba lokufinyelela i-LiveCD noma ukuqalisa isifaki ngqo, njengoba bekwenzeka kimi.
Futhi sithola iphuzu lokuqala lokwehlukanisa: Angisebenzisi isifaki esijwayelekile seDebian. Manje siqhubeka nokulandela izinyathelo zewizard yokufaka.
Sikhetha ulimi lwethu, olungeke lusetshenziselwe ukufakwa (okuzoba ngesiNgisi njalo), kepha lwenzelwe izakhiwo zethu.
Manje sikhetha ukwakheka kwekhibhodi yethu. Ngihlala ngisebenzisa i-International English ngezikhiye ezifile, ngoba ikhibhodi yami ibhalwe ngesiNgisi futhi ngale ndlela ngingabeka i-Ñ ngenhlanganisela I-AltDer + N.
Sikhetha indawo yethu yesikhathi.
Silungiselela igama lethu lomsebenzisi, iphasiwedi kanye negama lethimba lethu. Singasebenzisa futhi i-akhawunti yezimpande, ngoba ngokuzenzakalela kufanele sisebenzise iSudo.
Manje yingxenye eyinkimbinkimbi kakhulu yanoma yikuphi ukufakwa: ukwahlukanisa iDiski. Mina, njengoba bekungumshini obonakalayo, ngoba ngikhethe inketho yokuqala, ukuze iSemplice ihlukanise isikhala esabelwe njengoba ibifuna.
Uma ungazi ukuthi ungahlukanisa kanjani i-hard drive, noma awunaso isipele semininingwane yakho, funa usizo noma umane ungenzi lutho, qala kabusha ikhompyutha futhi ujabule
Ekugcineni ukwahlukaniswa kwakunjengalokhu:
Ngemuva kwalokho isicela ukuthi sifake (uma sifuna) i-GRUB:
Isinyathelo esilandelayo sifana kakhulu nalokho esikuthola ku- Antergos y iphuzu lesibili lokuhlukanisa. Ngokwethembeka, kuyinto ebengiyithanda kakhulu, ngoba inikeza umsebenzisi izinto eziningi. Uma sifuna, singeqa lesi sinyathelo ngoba uma sesifakiwe singakwazi ukwethula le wizadi futhi.
Manje isikhathi sakho sokuqinisekisa ukuthi konke esikwenze ngaphambilini kunjengoba kufanele kube njalo.
Futhi uma konke kuhamba kahle bese siqala ukufaka ..
ngize ngiqede 😀
Siqala kabusha ikhompyutha futhi sithola umphathi weseshini kusuka ku-LightDM.
Sibeka iphasiwedi yethu bese sithola iphuzu lesithathu lokuhlukanisa: Okulula Siqala iseshini ngomsizi osifundisa ukuthi siyisebenzisa kanjani ngendlela enembile. Imane isitshele: Ukuze uqalise, chofoza kwesokudla noma yikuphi kwideskithophu.
Kuhle kakhulu! Ufunde ukuvula imenyu eyinhloko kaSemplice, manje, thayipha noma yini ngekhibhodi:
futhi ngokuzenzakalela sithola uhlobo lwesiqalisi okuthi, ngokuya ngalokhu esikubhalayo, kuzosikhombisa imiphumela ehlukile. Futhi siyakuhalalisela! Manje usungasebenzisa iSemplice ..
Yini esiyithola kuSemplice?
Okubi kimi (iso, ngasho ngathi) ngalolu hlobo lokwabiwa nokulungiselelwa, ukuthi ekugcineni kufanele sife ngezicelo zezindawo ezinkulu zedesktop. Kungakho kwaSemplice sithola izinhlelo zokusebenza ezivela ku-LXDE, i-GNOME, i-XFCE noma yini eyi-GTK.
Vele, konke kusebenza ngokushesha okukhulu, kepha kuqala uhlelo ngo-300MB, okungukuthi, ungacabangi ukuthi ngokusebenzisa i-Openbox nge-Tint2 njengephaneli sizoqala ngo-60MB .. O, ngikhumbula kanjani i-60MB yami iqala nge-XFCE futhi Okufanayo
Phakathi kwezicelo esinazo njengesiphequluli I-Iceweasel, I-Claws Mail njengeklayenti leposi futhi INDAWO njengendawo yokugcina yomsebenzisi. Okokudlalwa komculo kuza ne- Pragha, engingayazi nokudlala amavidiyo njengeGNOME Mplayer. Qaphela isondo legundane, njengoba lisishukumisela emadeskini alo ayi-4.
Ngakolunye uhlangothi, Okulula ifaka ithuluzi lokwenza iphaneli yethu ngokwezifiso imidwebo.
Futhi njengoba ukwazi ukubona, yize kungukusatshalaliswa okubonakala kulula, kusivumela uhla lwamathuba esingenakuthola kokunye okukhulu. Okulula Kwenzelwe ukuthi kube lula kepha kube lula ukuyisebenzisa futhi ngicabanga ukuthi ifinyelela inhloso yayo kahle, futhi kubukeka kukuhle nje ngokuyiqala.
Iza ne I-Kernel 3.19, I-Systemd y I-Pulseaudio njengeseva yomsindo. Kufaka amanye amathuluzi angahle abe lusizo kwabaningi, noma ngabe uma sidinga okwengeziwe singadonsa iSynaptic bese sifaka noma yini edingekayo kumakhosombe kaDebian.
Itimu yesithonjana eza ngokuzenzakalela ibizwa ngokuthi ubhontshisi, netimu yeGTK ibizwa I-Zukitre-vera. Ngokusebenzisa ibhodi yokunameka uhlelo olubizwa nge- Isiqeshana okulungisekela impela kimi.
Umuzwa onginike wona, kanjalo nje nangemizuzu embalwa nje yokuhlolwa, ukuthi kungaba enye indlela enhle kakhulu yamakhompyutha anezinsizakusebenza ezinesizotha. Ungayilanda kuwebhusayithi yabo bese uzihlola ngokwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-Linux Semplice: Ukushintshwa kweCrunchbang?
UCrunchbang wayezinzile ngokwe-debian, lokhu kungazinzile kwe-debian (hhayi nokuhlola). Akuyona enye indlela, ngoba ingashayeka (futhi izoshayeka) lapho ivuselelwa.
Siyabonga ngokwabelana! kubukeka kukusha futhi kuthakazelisa!
Ukusetshenziswa okwandisiwe kwe-RAM kubonakala kungenakugwenywa. Kwikhompuyutha ephathekayo eneminyaka engu-11, uDebian Wheezy + KDE, inguqulo engama-32-bit, yayingu-170 Mb kuphela; kukhompyutha efanayo futhi ngezinketho ezifanayo zomsebenzisi, i-Sparky Linux (i-tuned Debian Sid) + KDE, ama-32 bits nawo, ama-230 Mb.
Ekugcineni ngiguqule i-KDE yaba yi-MATE, kepha angikwazanga ukuyithola ingezansi kwe-170 Mb ekuqaleni. Okungenani ngithole ukonga cishe ama-60 Mb, okuyi-computer ene-512 Mb ye-RAM okonga kahle.
Mhlawumbe uSemplice uyakufakazela, noma mhlawumbe iSiduction LXQt, ukuthi abakwaSiduction bebelokhu behle njalo ekulungiseni ukusetshenziswa kwe-RAM.
Ukusetshenziswa ngisebenzise kuphela umphathi wewindi, ukuze ngibe ngqo, icewm phakathi kwe-16 ne-32 mbs yokusetshenziswa ee
Kubukeka njenge-Antergos ... lokho kuyasolisa.
Ekugcineni uCrunchbang ushone esefile impela, kepha kwavela amanye ama-distros azama ukumvuselela ngendlela yabo, abanye baya egatsheni likaJessie, abanye bahlala neW Wheezy. Iphrojekthi ebaluleke kakhulu yiBunsenLabs 🙂
Ngokuphathelene neSemplice, kubukeka kukuhle, babenombono omuhle, ngicabanga ukuthi isingeniso kudeskithophu nendlela yokusebenzisa yilokho umuntu osanda kufika akudingayo ukuze angalahleki ezindaweni zamanje ezinjengeGnome noma i-Openbox, okuyizona umehluko omkhulu maqondana nesixhumi esibonakalayo seWindows.
I-Debian ayizinzile? Waphasa…
Iphuzu elilodwa: ISemplice ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux okwakhishwa ngo-2010, ngokususelwa kuDebian 'engazinzile'. Ngakho-ke, futhi konga umehluko ekuthuthukisweni kweDebian abasuselwe kuyo, indala kuneCrunchbang. Kubi ukuthi uSemplice obesendleleni ulahlekelwe esinye sezithonjana ze-linux ezinhle kakhulu, leyo yepenguin ehleli futhi izungezwe umbuthano okhanyayo.
Isiqu. Iqiniso langempela le-CB kwakunguCrunchBang Linux 8.10.01, ngokususelwa ku-Ubuntu nezinsuku kusuka ngoNovemba 2008.
Manje ngisebenzisa iFuntoo (nge-OpenRC) + i-Openbox esebenza neCompton, iTint2, iPulseaudio futhi ngaphandle kokusebenzisa iConsolekit (endala futhi ngaphandle kwesondlo) eno-90 Mb we-RAM nje ekuqaleni.
Futhi ngabambeka kuDebian Jessie, ngeXFCE, ngaphandle kweConsolekit ne-300 MB ye-boot RAM (njenge-derivative okhuluma ngayo). Hhayi ukuze ngikudumaze, kepha ngihlala neDebian RC futhi ngizinze kuze kube yilapho igatsha elizinzile liqhuma njengoba benza ngoJessie.
Bengisebenzisa iDebian isikhathi eside muva nje, iDebian eneSystemD ayiyimbi neze, into ukuthi angithandi ukuthi izinto ezithile zenziwa kanjani eSystemD, ngakho-ke ngakhetha ukubuyela kuFuntoo, futhi angisiye ngikhalaza, njengamanje ngine-VMs yokuhlola, kufaka phakathi i-Debian Stable yokwenza izivivinyo nge-OpenCart neMagento futhi ngaphandle kwakho konke enginakho eFuntoo angikaze ngidle ngaphezu kwe-1,5 GB ye-RAM ngasikhathi ngaphandle kokuthi lokho kuhlanganisa iFirefox IcedTea.
U-7.0.1 ubekhona izinsuku ezithile ngokulungiswa okuthile uma kuqhathaniswa no-7.0
Ilungele isexwayiso Yoyo 😉
Ngizobheka le distro. Ngizoyifaka ukuze ngibone ukuthi bushelelezi futhi bupholile.
Ngenye indlela yeCrunchbang, angicabangi ukuthi kuzoba nenye efana nayo hehe. Kwakuyi-distro ehlelwe kahle futhi eyenziwe kahle eyayindiza njengesiba (futhi ngokungathi sína).
(cmsv20) UCesar Silva kusho
I-athikili enhle kakhulu, ibingazi i-distro; kodwa-ke kubonakala kimi ukuthi kudla kakhulu ukuthi kube yi-minimalist noma ilula. Zama i-Lubuntu 13.10, ngicabanga ukuthi bekuyiyona ene-RAM encane kakhulu, elayisha isistimu nge-60MiB.
Phendula ku- (cmsv20) uCesar Silva
Sengivele ngiyizamile, akukubi, kepha lezi zimenenja zamawindi azingikholisi, zilula kakhulu, futhi ngaphandle kokuthi une-PC endala kakhulu, kungcono ufune okuthile okuphelele ngokwengeziwe. Ngokukhanya ngincamela i-LXDE
U-Edgar sierra kusho
Ngiyizamile futhi ngiyithandile, ngaphandle kokuthi angikwazi ukuhlela imenyu, ngoba imenyu ayisebenzi nokuthi leyo compton ayiqali kwasekuqaleni .. Kodwa noma kunjalo! # Bekungcono kakhulu ukusebenzisa izinsiza ezimbalwa kakhulu
Phendula u-Edgar sierra
Hhayi-ke, kubukeka kukuhle kakhulu ngelinye ilanga ngizokuhlola ngoba ngine-laptop encane engathanda i-distro enjengale kahle ... uyivuselele ibizwa nge-crunchbang ++ https://crunchbangplusplus.org/ esesigabeni se-beta futhi yize inezithombe ezingama-32-bits kuphela, inguqulo engama-64 kulindeleke ukuthi iphume kungekudala
Ngiyalithanda lelo phaneli
I-Archbang isesebangeni futhi ilula kakhulu, kepha masingakhohlwa ukuthi i-OS ayisona isiphetho uqobo, kodwa iyindlela, akusizi kangako ukuqala ngezingaphansi kuka-100MB uma kamuva sihlose ukuvula amathebhu wesiphequluli ayi-6. , lalela umculo futhi usebenze ngombhalo.
I-GNU / Linux inikeze impilo eningi kumakhompyutha angenamandla amancane, kepha kuzodingeka ukuthi kuvulwe igebe, manje iSystemd neWayland maduze zizokwenza impilo yethu kubuso bekhompuyutha ibe lula, kepha ngeke ivikele ukusetshenziswa kwehardware.
I-Firefox Tweaks: susa ezinye izinto ezingadingekile futhi uthuthukise ukusebenza